တရားအဆုံးအမများ Archives - Page2of 10 - Myanmar Express
သားကောင်းသားမြတ် ရစေသော ဂါထာ
ဘန္တေ- အရှင်ဘုရား၊ မေ-တပည့်တော်၏၊ ကု စ္ဆိတော- ဝမ်း၌တည်သော၊ ယော အယံကုမာရောဝါ- အကြင် သတို့သားသည်သော်လည်းကောင်း၊ ယာအယံကုမာရိကာဝါ- အကြင်သတို့သမီးသည်သော်လည်းကောင်း၊ အတ္ထိ-ရှိ၏။
အရိမေတ္တေယျ ဘုရားရှင် အားဖူးတွေ့လိုလျှင် လုပ်ရမည့် ”ကုသိုလ် (၁၀) မျိုး”
။ မိမိကိုယ်တိုင် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်း ပြုလုပ်ပါ။
၂။ ကိုယ်၏ရင်သွေး ဖြစ်စေ သူတပါးတို့၏ရင်သွေးဖြစ်စေ ရှစ်ဖြာပရိက္ခရာစုံလင်စွာဖြင့် သာသနာ့ဘောင် သို့ သွပ်သွင်း ချိးမြှောက်ပါ။
ဂုဏ်တော် 9ပါးကို ပုတီး (10)ပတ်ရအောင်ခွဲ၍ စိပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။မည်သည့်နေ့သားသမီးမဆို တနင်္ဂနွေနေ့ ည. 9နာရီမှည 12နာရီအတွင်း အဆင်ပြေချိန်တွင် စိပ်ပါ။
ဦးဇင်းသေရင်တော့…မျက်ကြည်လွှာတို့ နှလုံး ၊ အသည်း ၊ကျောက်ကပ် စတဲ့အတွင်းကလီစာတို့ ၊.တခြား အစားထိုးကုသလို့ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတို့ ၊ သုံးလို့ရတာတွေကို လိုအပ်တဲ့ လူနာတွေအတွက် ခွဲဝေပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
တနင်္ဂနွေနံ မိမိ ရောင်းလိုသော ပစ္စည်ပေါ်တွင် အဂ်ါ အခါမှာ ( သြ ) ဟူ၍ ရေးသားပါ ပြီး လျှင် အရှေ့တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ သြဇာ ၂၁ ညွန့် ဖြင့် ၂၁. ချက်တိတိ မိမိ ရောင်းလိုသည့်် ပစ္စည်း အမြန် ထွက်ပါစေ ပြေားရိူက်ပါနန္ဒဝန်ကျောင်
ထိုသို့နေလျှင် သူတကာခေါင်းပါးခြင်း (ဒုဗ္ဘိက္ခအန္တရာယ်) ဘေးသင့်ရောက်သော်လည်း မိမိမှာ ထိုဘေးမှ လွတ်မြောက်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာအရပ်သည် တောင်ကျွန်းဖြစ်၏။ထို့ကြောင့် ဤတောင်ကျွန်းတွင်နေထိုင်နေကြသူများအတွက် နိမိတ်သည် လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်းကို ရှေးပညာရှိကြီးများက အထက်ပါစကားဖြင့် သတိပေးထားခဲ့ကြလေ၏။
ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘုရားတစ်ဆူ ကိုးကွယ်ထားပြီ ဆိုလျှင်
ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါ ဂုဏ်တော် တစ်ခုခုကို အာရုံလေးပြုထားပါ။
ဘုရားကို တစ်ခုခုလှူဒါန်းမှုပြုတဲ့အခါ သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်ကဲ့သို့ အာရုံယူထားပါ။